Chrome 88.0.4324.150 na-edozi nsogbu nke ụbọchị efu | Site na Linux
Twobọchị abụọ mgbe mwepụ nke ụdị fixer nke Chrome na mwepụ nke adịghị ike dị oke egwu, Google kwupụtara ọkwa nke mmelite ọzọ maka Chrome 88.0.4324.150, nke na - edozi nsogbu CVE-2021-21148 nke ndi oji eji eme ihe (-Bọchị 0).
1 Banyere nsogbu dị na Chrome
2 Etu esi etinye ma ọ bụ melite ụdị Google Chrome ọhụrụ?
Banyere nsogbu dị na Chrome
Fọdụ ndị nyocha kwupụta na ọ bụ iji ihe ngwangwa ahụ mee ihe na ọgụ ZINC nke ngwụcha Jenụwarị megide ndị nchọpụta nchebe (afọ gara aga, a na-akwalite onye na-eme nchọpụta aghụghọ na Twitter na netwọkụ mmekọrịta dị iche iche, na mbido inweta aha ọma site na ịdebanye nyocha na isiokwu banyere adịghị ike ọhụụ, mana site na ịdebanye isiokwu ọzọ, ejiri m iji ụbọchị 0 mee ihe na-adịghị mma. nke na-agbanye koodu n'ime sistemụ mgbe a pịrị njikọ na Chrome maka Windows).
E kenyere nsogbu a ọkwa dị elu ma dị egwuN'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, egosiri na enweghị nsogbu anaghị ekwe ka ịgafe ọkwa niile nke nchedo ihe nchọgharị ma ezughị iji mezuo koodu na sistemụ n'èzí nke ebe sandbox.
Nsogbu dị na Chrome n'onwe ya anaghị ekwe ka ịgafe gburugburu ebe a na-akpọ sandbox, yana maka ọgụ zuru oke, achọrọ adịghị ike ọzọ na sistemụ arụmọrụ.
Ọzọkwa, enwere ọtụtụ ozi google metụtara nchekwa nke pụtara n'oge na-adịbeghị anya:
A akụkọ na ịkpa ike na ụbọchị 0 ọma nke ndi oru Project Zero choputara na afo gara aga. Isiokwu ahụ na-enye ọnụ ọgụgụ na 25% nke adịghị ike Ihe eji eme ihe banyere ubochi nke 0 bu ihe omumu na ihe omuma ndi ozo, ya bu, ndi ode akwukwo nke 0 choputara uzo ohuru ohuru n'ihi ezughi oke ma obu adighi nma (dika imaatu, ndi mmepe mmemme ha na-emezi. ikpe pụrụ iche ma ọ bụ dị ka à ga-asị na ọ bụ ihe ndozi na-enweghị isi nsogbu ahụ).
Enwere ike igbochi nsogbu ndị a na-enweghị isi ụbọchị site na nyocha na idozi nsogbu ndị ahụ.
Report maka ụgwọ Google kwụrụ ndị nyocha nche iji chọpụta adịghị ike. Onu ogugu nke $ 6.7 na ugwo ugwo na 2020, nke bu $ 280,000 karia na 2019 na ihe dika okpukpu abuo na nke 2018. Ejiri ugwo nke 662. Onyinye kasịnụ bụ $ 132.000.
Ejiri $ 1,74 maka ịkwụ ụgwọ metụtara nchebe nke ikpo okwu gam akporo, $ 2,1 nde - Chrome, $ 270 puku - Google Play na $ 400 puku maka enyemaka nyocha.
E webatara usoro 'Mara, gbochie, mmezi' iji jikwaa nsogbu fixes metadata, nyochaa ndozi, zipu ozi banyere adịghị ike ọhụụ, jigide nchekwa data nwere ozi gbasara adịghị ike, chọpụta njirimara nke ịdabere na ya, ma nyochaa ihe egwu nke ngosiputa ihe na-emebi emebi site na ịdabere.
Etu esi etinye ma ọ bụ melite ụdị Google Chrome ọhụrụ?
Ihe mbụ ị ga-eme bụ lelee ma mmelite ahụ adịlarị, maka ya ị ga-aga chrome: // ntọala / enyemaka ị ga-ahụ ọkwa na enwere mmelite.
Ọ bụrụ na nke a abụghị ikpe, ị ga-emechi ihe nchọgharị gị na ha ga-ebudata ngwugwu site na peeji nke Google Chrome, yabụ ha ga-aga gaa na njikọ na-esonụ iji nweta ngwugwu.
Ma ọ bụ site na ọnụ na:
[sourcecode ederede = "bash"] wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb=/sourcecode]
Mere ngwugwu download ha nwere ike ime nhazi ozugbo na njikwa njikwa ha họọrọ, ma ọ bụ site na ọnụ ha nwere ike ime ya site na iji kọmputa ede iwu na-esonụ:
[sourcecode ederede = "bash"] sudo dpkg -i google-chrome-iduro_current_amd64.deb [/ sourcecode]
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ịdabere na ya, ị nwere ike idozi ha site na ịpị iwu na-esonụ:
[sourcecode ederede = "bash"] sudo apt wụnye -f [/ sourcecode]
N'ihe banyere sistemụ nwere nkwado maka ngwugwu RPM dịka CentOS, RHEL, Fedora, openSUSE na nkwekọrịta, ị ga-ebudata ngwungwu rpm, enwere ike inweta site na njikọ ndị a.
Emechara nbudata ha ga-etinye ngwugwu na njikwa ngwugwu masịrị ha ma ọ bụ site na ọnụ ha nwere ike ime ya na iwu ndị a:
[sourcecode ederede = "bash"] sudo rpm -i google-chrome-iduro_current_x86_64.rpm [/ sourcecode]
N'ihe banyere Arch Linux na sistemụ sitere na ya, dị ka Manjaro, Antergos na ndị ọzọ, anyị nwere ike iwunye ngwa ahụ site na ebe nchekwa AUR.
Naanị ha ga-ede iwu na-esote na ọnụ:
[sourcecode ederede = "bash"] yay -S google-chrome [/ sourcecode]
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Chrome 88.0.4324.150 na-edozi nsogbu ụbọchị efu
Site n'eziokwu nke ịbụ onye emechiri emechi, ọ nwebeghị ntụkwasị obi n'onwe ya, ọ baghị uru igbu oge n'iji sọftụwia dị ka enwere ụzọ ndị ọzọ n'efu.
ClamAV 0.103.1 bịarutere na ndozi na njikarịcha maka nyocha onyonyo